Windows | Safari တွင်ဘာကြောင့်မသုံးသင့်သနည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Windows ပေါ်တွင် Safari ကိုဘာကြောင့်မသုံးသင့်သနည်း
Cristian Garcia | 30/09/2021 11:45 | Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း
မင်း browser ကိုပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေလား၊ မနေ့ကမင်းကိုယ်ပိုင် computer အသစ်တစ်ခု ၀ ယ်ပြီး browser တစ်ခု install လုပ်ချင်လား။ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ တစ်ချိန်ချိန်မင်းစဉ်းစားပြီးပြီ Windows တွင် Safari မည်သို့နေသနည်း။ ကောင်းပြီ၊ ဒီဆောင်းပါးကမင်းရဲ့စိတ်ကူးကိုခေါင်းထဲကထုတ်ပစ်လိမ့်မယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအခြားမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းယနေ့သင်၎င်းကိုလုံးဝစွန့်ပစ်ရမည်။ သို့သော်၎င်းသည် browser များနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးချယ်စရာများသောကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့။ အမှန်တော့၊ ယနေ့လူတိုင်းသည် Windows ရှိအခြားကွဲပြားသော browser များကိုရွေးချယ်ကြသည်။ သင်သည်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အလွန်အထီးကျန်ဆန်ပြီး၎င်းတွင်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။
Opera vs Chrome၊ ဘယ် browser ကပိုကောင်းလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့သင်ပြောသည့်အတိုင်းပေါ်လွင်စေသောရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည် Windows အတွက် Safari အထက် သင့်တွင် Google Chrome၊ Mozilla Firefox နှင့် Opera ရှိသည်။ တကယ်တော့၊ ငါတို့ကဒီ browser များအကြောင်းကိုအခြားဆောင်းပါးတွေမှာပြောခဲ့ပြီး Opera ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်တင်ပြခဲ့သည်။
ဘာဖြစ်တာလဲ၊ မင်းကမင်းက Apple ကိုကြိုက်တယ်၊ ငါတို့အဲဒါကိုနားလည်တယ်၊ သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေအားလုံးကမင်းရဲ့ Windows operating system မှာ Safari browser ကိုလိုချင်တာတောင်မင်းအတွက်ကောင်းတယ်လို့မင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ ဘာပြောခဲ့လဲ၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ဒါပေမယ့်ဒီနေ့တော့မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ကအောက်ပါစာပိုဒ်တွေအတွက်အကြောင်းပြချက်တွေကိုမင်းကိုပြောပြမယ်။
1 Windows ပေါ်ရှိ Safari: ငါဘာလို့မသုံးသင့်တာလဲ။
1.1 Windows ပေါ်တွင် Safari သည်အမြန်ဆုံး browser ဖြစ်ပါသလား။
1.2 မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ ပိုကောင်းတဲ့ Safari ရှိပါသလား။
Windows ပေါ်ရှိ Safari: ငါဘာလို့မသုံးသင့်တာလဲ။
ငါတို့စောစောကဆွေးနွေးခဲ့သလိုဘဲမကြာသေးခင်က Apple က Windows operating system အတွက်သူ့ရဲ့ browser အထောက်အပံ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ ပန်းသီးများသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသီးသန့်ဖြစ်သည့်အဆင့်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးနောက် Microsoft နှင့် Windows တွင်စတင်ရောင်းချခဲ့သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အကျပ်အတည်းတစ်ခုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းတို့အားများစွာတို့ကို Apple နှင့် iOS နှင့် MacOS အတွက်သီးသန့်ထားခဲ့သည်။
အဲဒီမှာ Safari ပြဿနာကပေါ်လာတယ်။ ၎င်းသည် Apple ၏ပြင်ပကိရိယာများအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ထားသောထိုထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် နောက်ဘက်တွင်ပန်းသီးရှိသည်။ ထို့ကြောင့် browser ကို Mac, iPhone, iPad နှင့် iPod Touch အတွက်သာရနိုင်သည်။
သင်၏ browser ကိုသင်၏ Windows operating system တွင်ထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်သင်လုပ်မည့်အမှား၏စိတ်ကူးကိုသင်နားလည်သည်Apple သည် Safari ကိုစတင်ဖြန့်ချိခဲ့သောနောက်ဆုံးဗားရှင်းမှာ ၅.၁.၇ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် ၎င်းကိုသင်လုံးဝမယုံပါကသင်လာရောက်လေ့လာနိုင်သော Apple အထောက်အပံ့မှသူတို့ပြောသည့်အတိုင်းလုံးဝထောက်ခံမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသို့မဟုတ်ဘာမျှမရှိပါ။ မှန်ပါတယ်၊ ပန်းသီးကငါတို့ကို ၂၀၁၁ ကတည်းကရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကအခြား browser အမျိုးအစားတစ်ခုကို Windows မှာသုံးတာကိုသူတို့နားလည်လိမ့်မယ်၊ သူတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိလိမ့်မယ်။
Linux vs Windows: လည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုစီ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
ထို့ကြောင့် Safari တွင် Windows ကိုမထည့်ရန်သင့်တွင်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ Apple ၏ browser သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ အထောက်အပံ့သို့မဟုတ်အပ်ဒိတ်များမရခဲ့ပါမရ။ ဒါကမင်းအတွက်ရီစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့က browser အကြောင်းပြောရင်တော့မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကိုမင်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပို့စ်ကိုရေးနေတဲ့ ၂၀၁၁ ကနေ ၂၀၂၁ ကနေစပြီးဘရောက်ဇာအားနည်းချက်အသစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်။ Safari သည်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုမရခဲ့လျှင် Safari ကို သုံး၍ PC ကိုအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၎င်းကိုမတပ်ဆင်ရန်အကြောင်းပြချက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီ။
ဒါတွေအားလုံးကမင်းအတွက်နည်းနည်းလေးများနေသလား။ ကောင်းပြီ၊ အဲဒါကိုမင်းသိရမယ် ယနေ့ web development သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ကောင်းပြီ၊ မင်းကရိုးရှင်းတဲ့ HTML နဲ့မတူတဲ့ web page တွေကိုဖြတ်သွားရင်အဲဒါကဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါတွေကိုပိုသုံးစရာမလိုဘဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးပေါ် CSS, Java နဲ့နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွေကိုသုံးနေတဲ့ ၀ က်ဆိုက်တွေကိုဖြတ်သွားရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာသုံးနေတဲ့အခြား language programming များစွာဟာအရင်တုန်းကထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ သူတို့ကမင်းအတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ မင်းသူတို့ကိုမြင်ယောင်လို့မရဘူး။
ထို့ကြောင့်သင်မည်သည့် website သို့ ၀ င်သောအခါသင်မြင်ချင်သည်ကိုငါတို့မယုံပါ လုံးဝပျက်သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ပါမရ။ Safari သည်ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်မည်မဟုတ်သလို၎င်းကိုသင်လုံးဝမကြိုက်ပါ။ ဒါကိုမင်းမသိဘဲနဲ့မင်း PC ကမကောင်းတာဒါမှမဟုတ်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်နေတာလို့မင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။
Windows ပေါ်တွင် Safari သည်အမြန်ဆုံး browser ဖြစ်ပါသလား။
ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ငါတို့ကမင်းကိုအဖြေပေးဖို့ကြာကြာစောင့်မှာမဟုတ်ဘူး ဒီမေးခွန်းကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာတွေ့ခဲ့တာမရ။ Safari နှင့် Windows အကြောင်းအထက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသမျှသည်မမှန်ပါ။ ယနေ့ Windows operating system ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်သော browser များရှိသည်။ ဥပမာ Opera, Google Chrome (သို့) Mozilla Firefox ။
ဘာကိုမှအတိအကျမဖော်ပြဘဲငါတို့အဲဒါကိုပြောပြီးပြီ အဲဒီသုံးခုစလုံးကပိုကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဒီနေ့မှာ Explorer အဟောင်းကသူ့ဗားရှင်းအသစ်ကိုမသုံးဘဲ Safari ထက်တောင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ ငါတို့ Explorer အဟောင်းကိုရှေ့ထားရင်မင်းမင်းရဲ့ PC မှာဘာ install လုပ်ချင်လဲစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
Pop-up ကြော်ငြာကို Google Chrome တွင်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှစိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သနည်း
Safari သည်သင်၏ Windows operating system သို့ကောင်းစွာပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ bookmarks တွေကိုပေါင်းထည့်တဲ့အခါမှာပျက်ကျမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ ၎င်းကို installer တစ်ခုတည်း၌ Apple app များကိုအဆက်မပြတ်သုံးရန်ကြိုးစားပါ လုံခြုံရေးနှင့်ပင်လယ်ဓားပြများတွင်အားနည်းချက်အမြဲရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအလွန်လုံခြုံစေသော browser တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါ။ ဒါတွေအားလုံးကိုငါတို့ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းတွေကနေစုဆောင်းထားတဲ့ဒေတာတွေကိုရည်ညွှန်းတာပါ။ ယခုသင်၏ ၂၀၂၁ pc တွင် ၂၀၁၁ ဗားရှင်းကို install လုပ်ခြင်းသည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုတွေးကြည့်ပါ။
မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ ပိုကောင်းတဲ့ Safari ရှိပါသလား။
အရင်တုန်းက Safari browser ကို install လုပ်ခဲ့လို့အဲဒါကမင်းကိုအဲဒီတုန်းကခွင့်မပြုတဲ့ web page content တွေအများကြီးကိုမျိုးပွားခွင့်ပြုတဲ့အတွက်။ အဟမ်း၊ Internet Explorer ဒါပေမယ့်အဲဒါကလောလောဆယ်မှာဒီလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး.
မင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုဖတ်ခဲ့ရင်အဲဒီပို့စ် (သို့) မှတ်ချက်က ၂၀၀၀ ခုနှစ်အနိမ့်ပိုင်းမှာရက်စွဲဖြစ်ရမယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၂၀၂၁ မှာမင်းဒီစိုးရိမ်မှုကိုမေ့နိုင်တယ်။ လက်ရှိ browser များဖြင့်သင်မည်သည့် browser အသစ်မှမဆိုအွန်လိုင်း၌သင်တွေ့သောဗွီဒီယို၊ အသံ၊ ပုံရိပ်ဖိုင်များကိုကြည့်နိုင်လိမ့်မည်။ သင်ဝင်ကြည့်သောဆိုဒ်များနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာအားလုံး သူတို့သည်လက်ရှိ browser များဖြစ်သော Opera, Chrome သို့မဟုတ် Firefox ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေလိမ့်မည်။
Apple Watch ပေါ်ရှိ WhatsApp၊ ၎င်းကိုမည်သို့ သုံး၍ သုံးမလဲ
တကယ်တော့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာငါတို့ဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲ၊ သင်က ၂၀၁၁ Safari ကိုသုံးခဲ့ရင်အဲဒါကမင်းကိုအတော်လေးပြဿနာတွေပေးလိမ့်မယ်။ ယနေ့ကဲ့သို့ကွဲပြားသောပုံစံများကိုသုံးသည် ဝဘ်စာမျက်နှာရှိဗီဒီယိုနှင့်အသံအတွက် vp9 သို့မဟုတ် oggမရ။ ဤပုံစံများကိုလက်ရှိ browser များမှလွယ်လွယ်ကူကူပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သော်လည်း Safari နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုသင် download လုပ်ပြီး install လုပ်ထားသောအခါဤ extensions အားလုံးကိုသေပြီဟုစဉ်းစားနိုင်သည်။ လက်ရှိ extension အားလုံးပါ ၀ င်သောမည်သည့်အမျိုးအစားကိုမှသင်မျိုးပွားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့်နိဂုံးချုပ်သည်၎င်းသည်လုံးဝမထိုက်တန်ပါ။ Windows တွင် Opera နှင့် Chrome အကြောင်းပထမအပိုဒ်၌ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသောဆောင်းပါးကိုလေ့လာကြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ စစ်မှန်ပြီးလက်ရှိ browser အနိုင်ရသူကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ နောက် Mobile Forum ဆောင်းပါးမှာတွေ့မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း » Windows ပေါ်တွင် Safari ကိုဘာကြောင့်မသုံးသင့်သနည်း